လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်တော်သိသမျှ (၉) (သို့မဟုတ် ) Honda
ကျွန်တော်သိသမျှ (၉) (သို့မဟုတ် ) Honda
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှင့် သံဃာတော်များ၏ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြောင်း ပြောရင်းနှင့် မန္တလေးမြို့ အကြောင်းရောက်သွား၏။ မန္တလေးတွင် ကားထက် ဆိုင်ကယ်ကို Crazy ဖြစ်ကြကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကို သိန်းရာကျော်နေပါစေ ၀ယ်စီးလေ့ ရှိကြောင်း၊ အောက်ဒိုးတွေအကြောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေအကြောင်း၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအကြောင်းပြောဖြစ်ကြရာ Honda စက်ပစ္စည်း အကြောင်း လည်းပါ၏။ ထိုမိတ်ဆွေမှာ Honda သည် ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်စက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမျိုးအစားများကို တန်းစီပြောနိုင်သော်လည်း Honda ဆိုသည် ဘယ်ကစ၍ ဘယ်လိုပေါ်သည်ကို မသိပေ။ သို့နှင့် ဤဆောင်းပါးကို ရေးရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတင်မဟုတ်၊ ယခုလက်ရှိ တော်တော်များများမှှာ Honda စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေသော်လည်း Honda ကို ဘာမှန်းမသိကြပေ။
ဟွန်ဒါဟူသောအမည်ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတိုင်းလိုလို ကြားဖူးကြသည်၊သိကြသည်။ မော်တော်ယာဉ်ကားဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဆိုင်ကယ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရေစုပ်စက်များဟူ၍ လည်းကောင်း ပြောကြပေမည်။ သို့သော် Honda သည် လူတစ်ယောက်၏ နာမည်ဖြစ်သည်ကို သိသူ နည်းပါးကြ၏။
Gihei Honda နှင့် Mika တို့မှ ဆိုအိချိရိုဟွန်ဒါကို ၁၉၀၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သားချင်းကိုးယောက်တွင် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ ၁၉၂၂ခုနှစ်တွင် စက်မှုကျောင်းမှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် အလုပ်သင်အနေဖြင့် Art ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ တွင် ပစ်စတင်ကွင်းများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ ရှီဇူအိုကာပြည်နယ်ဟာမာမတ်ဆုမြို့ရှိ ကုမ္ပဏီခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုကို ဟွန်ဒါ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ဖူးသည်။ တိုကာအိဆေ့ကီအမည်ရှိ ထိုကုမ္ပဏီတွင် ၀န်ထမ်းနှစ်ထောင်ခန့်ရှိသည်။ စစ်ကြီးပြီးသောအခါ ဟွန်ဒါက ထိုကုမ္ပဏီကို ရောင်းထုတ်လိုက်သည်။ထိုအချိန် ကာလက ဟာမာမတ်ဆုမှ တီထွင်ရေးသမား ဟူသောနာမည်ဖြင့် ဟွန်ဒါမှာ ထင်ရှားနေပေပြီ။ စစ်ကာလအတွင်းတွင် သူ့ဉာဏ်စွမ်းကို စစ်လေယာဉ်များ အတွက် ဒလက်များတီထွင်ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုခဲ့ရသည်။ အစိုးရမှ စစ်ပစ္စည်းများ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန အတွက် ဟွန်ဒါအား ကမ်းလှမ်းကာ ခေါင်ဆောင်များ ချမှတ်ထားသော လမ်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဟွန်ဒါအနေဖြင့် ငြင်းဆန်၍ မရခဲ့ပေ။
စစ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားသောအချိန်၌ ဂျပန်စစ်တပ်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းစက်မှ ဂျင်နရေတာကို သုံးထားသော စက်တပ်ဘိုင်စကယ်ကို ပထမဦးဆုံး တီထွင်ခဲ့သည်။ အခြားသော တီထွင်မှု များစွာရှိခဲ့သော်လည်း ဘီတပ်ယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စက်တပ်ဘိုင်စကယ်မှာ သူ၏ ပထမဦးဆုံး တီထွင်မှုပင် ဖြစ်သည်။
စက်ရုံအလုပ်သမားများနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နေသော Honda
၁၉၄၈ တွင် Honda Motor Company ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃တွင် Benri Model J အမျိုးအစား မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ မတ်လ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ဟွန်ဒါမှ သူ၏ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအား ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "သူ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိ မော်တော်ကားအမြန်မောင်းပြိုင်ပွဲတွင် မိမိကုမ္ပဏီထုတ် ယာဉ်တစ်စင်းစင်းက ဗိုလ်ဆွဲနိုင်ရေးပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်ယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ရန် အဆင့်ရှိသည်ဟု မိမိယုံကြည်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စက်မှုကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးမြှင့် တိုးတက်စေရန် ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ယခုထက်အစွမ်းကုန်ပိုမို ပူးပေါင်း ကြိုးစားကြရန်" ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့လေသည်။
ထိုအချိန်က အင်္ဂလန်နှင့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေအလွန်ရှိ မင်းန်းကျွန်းပေါ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသော တိုးရစ်ဖလားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲသည် အတော်ပင် မက်မောစရာ ကောင်းလှ၏။ ထိုပြိုင်ပွဲကား အမေရိကနှင့် ဥရောပ ထိပ်သီးကုမ္ပဏီများမှ အကောင်းဆုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ၀င်ပြိုင်ကြသော ပွဲပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှာ ငွေကြေး အကြပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် တိုးရစ်ဖလားပြိုင်ပွဲ ပြိုင်ကွင်းကို လေ့လာရန် အင်္ဂလန်သို့ ဟွန်ဒါ သွားရောက်သည်။ မြင်လိုက်ရသည်က ဟွန်ဒါလုပ်ထားသော ကားအမြန်နှုန်းနှင့် လုံးဝလုံးဝ ကွာခြားနေသော မြန်နှုန်းမြင့် ကားများဖြစ်နေသည်။၊ ၎င်းပြိုင်ပွဲဝင်ကားများမှာ တစ်မိနစ်လျှင် အပတ်ရေ တစ်သောင်းကျော်ဖြစ်ပြီး ဟွန်ဒါထုတ်လုပ်သောကားမှာ တစ်မိနစ်လျှင် အပတ်ရေ သုံးထောင်သာ ရှိလေသည်။ သို့သော် သူ အားမလျှော့ခဲ့။ သူလိုနေသည်က လေယာဉ်ပျံအင်ဂျင်တွေထက် ပါ၀ါနှစ်ဆရှိသည့် အင်ဂျင်ပင်။ ထို့အချိန်က တီထွင် ထုတ်လုပ်ရန် စက်အစိတ်ပိုင်းများ ဂျပန်ပြည်တွင်းတွင် ၀ယ်မရ၊ မရှိကြပါ။ သို့နှင့် ဟွန်ဒါ ဥရောပသို့ ထွက်ကာ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ လိုက်လံဝယ်ယူရလေသည်။
သူလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏အင်ဂျင်စက်နှိုးသောအခါ မီးပွားများ များစွာထွက်နေသည်၊ ထို့ကြောင့်ပင် ဆိုနီကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်တိုင်ပင်ကာ ဆိုနီမှ ထုတ်လုပ်သော ထရန်စစ်စတာများကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားခဲ့ သေးသည်။ သို့သော် အသုံးမပြုခဲ့ပါ (ဆိုနီကော်ပိုရေးရှင်း တည်ထောင်သူအကြောင်းအား အလျဉ်းသင့်ပါက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အဖြစ် ရေးသားပါဦးမည်။)။ ပြိုင်ပွဲဝင်မည်ဟု ကြေညာပြီး ငါးနှစ်တာ ကာလရောက်မှပင် ဟွန်ဒါ၏ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည် တိုးရစ်ဖလားသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဆုဖလားကား မရရှိခဲ့၊ ပြိုင်ပွဲဝင် သုံးနှစ်တာကာလသို့ ရောက်သောအခါ( ၁၉၆၁ ခုနှစ်)တွင် ဆုဖလားကို ရရှိပါတော့သည်။ အောင်မြင်မှုကား အခြားသူများနှင့်မတူဘဲ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးတွင် ဆုဖလားများအားလုံး ရရှိခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။
ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော ဆိုင်ကယ်များသည် ကမ္ဘာအနှံ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမျှဖြင့် သူ၏ ရည်မှန်းချက်ကား မပြီးသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ပင် ဟွန်ဒါသည် လေဘီးတပ်ယာဉ်များဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရန် စိုင်းပြင်းလာခဲ့သည်။ သို့သော် ဂျပန်အစိုးရမှ ကန့်ကွက်မှုများ ရှုတ်ချမှုများ ဟွန်ဒါ့ကို ရာဇသံပေးကာ ပြောကြားမှုမျိုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျပန်အစိုးရသည် တိုယိုတာနှင့် နစ်ဆန်း ကုမ္ပဏီများကိုသာ ကားလုပ်ငန်း လုပ်စေချင်ပြီး၊ ဟွန်ဒါ့အား ဂျပန်တွင် ကားလုပ်ငန်းအသစ်မလိုဟုပင် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဟွန်ဒါ ဂရုမစိုက်ဘဲ သူ၏ အလုပ်ကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ အမြင်နှင့် အစိုးရအမြင်များ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤတွင် အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာနများမှ နှောက်ယှက်မှုက မပြီးသေး၊ ကားအရောင်များ ခြယ်သရာတွင်ပါ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟွန်ဒါသည် သူ၏ကားများတွင် အနီရောင်ကို စတင်အသုံးပြုမှုကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ဟွန်ဒါမှ "ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်ပြည်ရဲ့ အချို့သော ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ချိုးဖောက်သင့်နေပြီ၊ ဒါမှ ဂျပန်ပြည် တိုးတက်မှာ"ဟု အစိုးရထံ ပြန်လည်ချေပ ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊မေလတွင် သူသည် ကူးပါးကလိုင်းမက် ဟုခေါ်သော Formula 1 ကားတစ်စီးကို ၀ယ်ယူ၍ တစ်စစီဖြုတ်ကာ လေ့လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ခုနှစ်တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီ၏ ပထမဦးဆုံး လေးဘီးတပ်ယာဉ်ဖြစ်သော HONDA S 500 မိုဒယ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဖော်မြူလာဝမ်း Formula 1 ကားပြိုင်ပွဲသို့ နောက်နှစ်တွင် ၀င်ရောက်မည်ဟု ကြေညာလိုက်လေသည်။ ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး တစ်နှစ်အကြာ ၊ ၁၉၆၅ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလတွင် မက်ဆီကို ကားပြိုင်ပွဲ္ပ၌ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖလားရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၂တွင် အမေရိက ဈေးကွက်တွင် Subaru နှင့် Mazda တို့ထက် သုံးဆမျှ ရောင်းခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာတွင် Honda ကားနှင့် ပစ္စည်းများမှာ အမြင့်ဆုံးဈေးကွက်သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။
လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အမြင်များ ကွဲလွဲလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီင်္၏ ဥက္ကဌအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး အကြံပေးအနေဖြင့် နေထိုင်လေသည်။ ၁၉၇၉တွင် အိုဟိုင်းအိုတွင် စက်ရုံဖွင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ အသက်(၈၄)နှစ်တွင် တိုကျိုဆေးရုံ၌ အသဲရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်လေသည်။ "ငါသေရင် င့ါအသုဘကြောင့် ကားလမ်းတွေ မပိတ်မိစေနှင့်" ဟု မှာခဲ့သည့်အတိုင်း သူ့ဇာပနကို အကျယ်မချဲ့ပဲ ကျင်းပခဲ့လေသည်။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, February 23, 2009
အကိုရေ...မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပဲဗျာ.. အရင်က ဟွန်ဒါဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး...
February 23, 2009 at 8:42:00 AM GMT+6:30
ခုလို ရှင်းပြပြီး မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်
ဟွန်ဒါဆိုတာ ခုမှပဲသေချာသိတော့တယ် မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ ကိုလင်းဦး
February 23, 2009 at 9:05:00 AM GMT+6:30
February 23, 2009 at 9:08:00 AM GMT+6:30
အခုလို ပညာဗဟုသုတလေးတွေ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ။ တိုယိုတာ၊ နစ်ဆန်း လိုကားကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူတွေအကြောင်းတော့ သုတစွယ်စုံ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်၊ ဟွန်ဒါကိုတော့ မကြားဖူးဘူးဗျာ၊ အခုလို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ :)
February 23, 2009 at 11:35:00 AM GMT+6:30
အကိုရေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူး
အခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ
February 23, 2009 at 12:22:00 PM GMT+6:30
ဂျပန်ခေါင်းကြီးများ စက်မှုစီးပွားပိုင်း ဘာသာပြန်စာအုပ်မှာ ဖတ်ဖူးတယ်။
ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။ အတော် စုံစုံလင်လင် တင်ပြထားတယ်။ စုစည်းတင်ပြမှုကို အားကျမိပါတယ်။
February 23, 2009 at 4:50:00 PM GMT+6:30
ခုမှပဲ စုံစုံလင်လင် သိရတယ် ..
ခင်ဗျားလက်ကိုလည်း ဟွန်ဒါ မော်တာတပ်ပြီးတီးဗျာ
ဒါမှ တီးကွက်တွေပိုသွက်လာမှာ ရွာစားရ .. :P အဟေးဟေး
February 24, 2009 at 12:39:00 AM GMT+6:30
ဒီလောက် ဂဃနဏ မသိပါဘူး။
ရှယ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါအစ်ကိုရေ .. ..
February 24, 2009 at 9:59:00 AM GMT+6:30
အခုလို ဟွန်ဒါ အကြောင်းဖော်ပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
February 24, 2009 at 10:57:00 AM GMT+6:30
ဗဟုသုတလေးတွေ ပြန်ပြီး မျှဝေပေးထားတဲ့အတွက်
February 25, 2009 at 11:45:00 AM GMT+6:30
အကောင့်နှစ်ခုထပ်သွားလို့ အပေါ်က apple အကောင့်ကို ဖျက်လိုက်တာပါ။
February 25, 2009 at 11:47:00 AM GMT+6:30
ကျေးဇူးပါဗျာ. ကောင်းမွန်သော ဗဟုသုတ ရရှိစေတဲ့ နေရာတိုင်းဟာ မင်္ဂလာ ရှိတဲ့ အရပ် ပါ.
March 18, 2009 at 9:17:00 PM GMT+6:30